Retail – Hissho Sushi
မတ် 17, 2020 ဘလော့ဂ်သတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
စူပါစျေးကွက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မူလတင်ထားသောဆောင်းပါး၊ မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ အန်ဒီနယ်လ်ဆင်သည်
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားအခြေစိုက် Hissho Sushi သည် Charlotte သည်နိုင်ငံအနှံ့ကုန်စုံပတ် ၀ န်းကျင်ဌာနများ၌ရောင်းချသော Poke ဖလားများဝယ်လိုအားအလွန်များနေကြောင်းကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဒုဥက္ကpresident္ဌ Corey Wilde ကပြောကြားသည်။
အကြောင်းပြချက်ကြီးလား။ Poke ဖလားများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တတ်နိုင်ပြီးခေတ်မှီသည်။
“ Poke ဖလားများသည်စျေးဝယ်သူများအားသက်သေပြနေသည်။ သူတို့သည်အပူဆုံးအချက်အချာကျသောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုရရှိရန်ဈေးကြီးသောစားသောက်ဆိုင်သို့သွားစရာမလိုကြောင်းသက်သေပြသည်” ၀ ယ်သူရဲ့အလုပ်များတဲ့ခရီးသွားလူနေမှုအဆင့်အတန်းအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်လတ်ဆတ်တဲ့ဆန်းသစ်တဲ့အစားအစာမျိုးစုံကိုစားသုံးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လီမိတ်ဖက်တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။
Corey Wilde, VP စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု | Hissho ဆူရှီ
Hissho ကဲ့သို့ကုန်ပစ္စည်းများလက်လီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စူပါမားကတ်များကစူပါမားကတ်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများသည်အစားအစာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏အမြန်ဆုံးတိုးတက်နေသည့်ကဏ္ sector ဖြစ်ပြီးရောင်းအားမှာ ၁TP2T12.7 ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်နေသည်ဟုဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် FMI - စားနပ်ရိက္ခာစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းကပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များရှာဖွေနေသည့်ပရီမီယံ၊ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုတိုးတက်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုသည်" ဟုတောလ်ကဆိုသည်။
လေးနှစ်ပေါက်ကွဲမှုကြီးထွားမှု - နှင့်နေဆဲသွား
၂၀၁၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ စာရင်းအင်းအချက်အလက်အရအမေရိကန်သည်ပင်လယ်ရေခမ်းခြောက်မှုနှုန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၁၇၁TP1T တိုးတက်မှုနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်တာကာလအတွင်း ၁၈၇၁TP1T တိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်သည်။
Juneau အခြေစိုက် Alaska Seafood Marketing Institute ၏ပြည်တွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Megan Rider ကဤလမ်းကြောင်းသည်မကြာမီပြောင်းလဲတော့မည်ဟုမထင်ပါ။
"ဒီနှစ်မှာ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာတာတွေ့ရမယ်။ ၂၀၂၀ နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုတိုကျိုနဲ့ဂျပန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အတူအမေရိကန်အချက်အပြုတ်ရှုခင်းကိုထပ်မံထိုးဖောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်"
Megan Rider, ပြည်တွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ | Alaska ပင်လယ်စာစျေးကွက်ဌာန
ပထမ ဦး စွာ Rider ထောက်ပြသည့်အနေဖြင့် US Now တွင်စားသောက်ဆိုင်များသည်ပေါက်ပြဲသွားသည်။ မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထဖြစ်သည့်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်ဌာနများဖြစ်သောကုန်စုံဆိုင်ရာဌာနများသို့လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်။
သူမကိုယ်တိုင်စားသောက်သည့် poke bars များဖြင့် ဦး ဆောင်သည့်အစားကောင်းကြိုက်သူများနှင့်သဘာဝစူပါမားကက်များအပြင်ပင်လယ်ရေကြောင်းဌာနမှထွက်လာပြီးအဓိကစားသောက်ဆိုင်များသို့လက်လီရောင်းချသူများကအခြားပြင်ဆင်ထားသည့်အသစ်သောအရာများတွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်နို့မှုန့်ကိုပိုမိုကမ်းလှမ်းလာကြသည်။
ဒေသခံစားဖိုမှူးများကအရည်အသွေးမြင့်မား။ တာ ၀ န်ယူသည့်ရင်းမြစ်များပါဝင်သည့်ကုန်စုံလက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်ရောင်းချသော Hissho Poke ဖလားများကိုနေ့စဉ်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်ဟု Wilde ကဆိုသည်။ Poke ကသူကကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များကသူတို့၏ဆူရှီများကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသားအရာအားလုံးရှိသည်၊ သို့သော်ယခုသူတို့သည်“ အပြင်ဘက်တွင်” စဉ်းစားနေပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲ။ အဆင်ပြေသည့်ပန်းကန်လုံးထဲသို့သွက်သွက်လက်ခုပ်တီး။ သွားလာနေကြသည်။
အထူးသဖြင့် Gen Z စျေးဝယ်သူများ၊ စားသုံးသူများအတွက်အဓိကကျသည့်ပရိသတ်များသည်သူတို့၏အစားအစာများသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသိရှိရန်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားကြသည်။
စားသောက်ဆိုင်များမှ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအသင့်စားဆိုင်များအထိပင်လယ်စာများ၊ အစေ့များနှင့်အသီးအနှံများပါ ၀ င်သည့်ပေါင်ဖလားများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အဓိကအခွင့်အလမ်းလည်းရှိကြောင်းသူမကထပ်ပြောသည်။
အာရှအနံ့အရသာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကခေတ်စားနေသည်။ နွေရာသီ ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ်ကြောင့်ယခုနှစ်တွင်အမေရိကန်၌နောက်ထပ်အချက်အပြုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလိမ့်မည်ဟု Rider ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ မီးတက်ဖလားများ၏ပေါင်းစပ်တက်နေသောလမ်းကြောင်းနှင့်အာရှ၏အရသာများဆီသို့တိုးပွားလာသောလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ အပူပိုင်းပုတ် Bowlပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းရေနံနှင့်ဆန်ရှလကာရည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်သည်” ဟုသူမကဆိုသည်။ “ Poke ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လက်လီရောင်းချသူများကဒီစာရွက်နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုရယူနိုင်ပါတယ် Alaska ပင်လယ်စာ websiteဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်မျှဝေရန် (သို့) စတိုးဆိုင်တစ်ခုလုံးအတွက်ပြန်လည်ဖန်တီးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ”
ထို့အပြင်၎င်း၏ site ပေါ်တွင်, ASMI တစ် ဦး ရှိပါတယ် အရသာနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းလမ်းညွှန် လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ရိုင်း Alaska ဆော်လမွန်သို့မဟုတ်ရိုင်းအလက်စကာ surimi မှ စ၍ စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသောဖုတ်များကိုပြုလုပ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်မျှဝေနိုင်သည်။
စျေးဝယ်သူများသည်ပင်လယ်စာနှင့်ပတ်သက်သောအခါလတ်ဆတ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ စူပါမားကက်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိပင်လယ်စာအများစုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အေးခဲသွားသည်ကိုသတိမပြုမိကြချေ။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးနှင့်အစားအစာလုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။
အေးခဲနေသောနေအိမ်ပြင်ဆင်မှုအတွက်စားသုံးသူများသည်အစာမစားမှီမိနစ် ၃၀ ခန့်မသွားမီရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ညအိပ်ထားသောကန့်လန့်ကာအတွင်းရှိငါးများကိုရေခဲစေနိုင်သည်။
ဖေ ‌ စက်တင်ဘာ 20, 2020 ဘလော့ဂ်တည်နေရာများသတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
Meijer ၏စားသောက်ဆိုင်အသစ် Sushi နှင့် Craft Beer ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်
Winsight ကုန်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မူလဖော်ပြခဲ့သောဆောင်းပါး၊ မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ဂျနီဖာ Strailey ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Brighton, Mich ။ တွင်တင်ပါးဆုံရိုးအသစ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရှိပြီး Meijer စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်ရှိသည်။ Grand Rapids, Mich ။ အခြေစိုက်ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်သည်စျေးဝယ်သူများအားဝယ်လိုအားများသောစတိုးဆိုင်ဆူရှီနှင့်ယာဉ်ဘီယာဘားအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန် Hissho Sushi နှင့်ဒေသခံ Bell's Brewery တို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Meijer မှကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Becky Bronkema က“ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်များကို ၀ ယ်ယူစဉ်တွင်စဉ်းစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအားဖောက်သည်များအားပေးရမည့်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ငါတို့ရဲ့စတိုးဆိုင်အများစုမှာပီဇာ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဆူရှီအပါအ ၀ င်လတ်ဆတ်တဲ့ရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်။ ဒါကြောင့်ဆိုင်အတွင်းရှိစားသောက်ဆိုင်အယူအဆကိုဒေသခံအိမ်နီးချင်းများကသူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ စီးပွားရေးအမြန်တွေ့ဆုံရန် (သို့) အမြန်ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ကုန်စုံစျေး ၀ ယ်ခြင်းကိုသူတို့၏စာရင်းတွင်မစစ်ဆေးပါ။
Becky Bronkema, ကုန်သွယ်မှုဒါရိုက်တာ | Meijer
Meijer စတိုးဆိုင်အတွင်းရှိ ၈၄၀ စတုရန်းပေထိုင်နိုင်သောဆူရှီစားသောက်ဆိုင်သစ်သည်နေ့စဉ်စားဖိုမှူးမှပြင်ဆင်ထားသောလက်ဖြင့်လှည့်ထားသောဆူရှီများကို; Hisso ၏ပူပြင်းသောအစားအစာအသစ်များ၊ dim sum; နှင့်အသာပုတ်ပေါ်ယာဉ်ဘီယာတစ် ဦး အစဉ်အဆက် - ပြောင်းလဲနေတဲ့ menu ကို။ စားသောက်ဆိုင်တွင် Healthy Morning Collection နံနက်စာစားသုံးမှု menu တွင်ထောပတ်သီးကင်၊ acai ဖလားများနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များပါဝင်သည်။
“ Hissho Sushi ဟာဒီအယူအဆသစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကုန်စုံဆိုင်မှာဖောက်သည်တွေရဲ့ညစာစားပွဲကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေပြီ” ဟု NC အခြေစိုက် Hissho Sushi မှ Charlotte ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dan Beem ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဒန် Beem, CEO ဖြစ်သူ Hissho ဆူရှီ
FMI ၏အဆိုအရအစားအစာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်လာသောကဏ္အနေဖြင့်စူပါမားကက်သည်အစားအစာများကို ၁TP2T12.7 ဘီလီယံရောင်းအားထက် ကျော်လွန်၍ ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်လက်လီစားသောက်ကုန်များရောင်းဝယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန် Hissho ၏သုတေသနသည်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်များထံမှကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းထက်ပိုမိုလိုချင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည် - သူတို့သည်အတွေ့အကြုံရလိုကြသည်။
နိုင်ငံအတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံးဆူရှီလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Hissho Sushi သည်ပြည်နယ် ၄၂ ခုတွင်တည်နေရာ ၂၀၀၀ နီးပါးရှိသည်။ "Hissho ဟာအသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုရဲ့အထွon်အထိပ်ရောက်နေပြီ" ဟု Beem မှပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက် ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ဆက်ပြီးပေါ်ထွက်လာတာနဲ့အမျှနေ့စဉ်တိုးတက်နေတဲ့တန်ဖိုးရှိအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်သောလက်လီရောင်းချသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဖမ်းဆီး၍ သွားလိုသောစျေးဝယ်သူများအတွက် Meijer သည်စားသောက်ဆိုင်၏လတ်ဆတ်သောဆူရှီလိပ်များကိုအသင့်စားဆိုင်များတွင်နေ့စဉ်ထုပ်ပိုးပြီးအဆင်ပြေစေသည်။
ဖေ ‌ စက်တင်ဘာ 12, 2020 ဆုများနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများဘလော့ဂ်သတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
Hissho Sushi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အထင်ကြီးလေးစားသည့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်များထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည်
မူလက Charlotte စီးပွားရေးဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေဆောင်းပါး, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Jen Wilson က
ကြီးထွားလာနေသည့် Charlotte ဒေသသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြီးသေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးပွားလာသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ဦး ဆောင်သည်။ စိန်ခေါ်မှုများကိုသူတို့ကုမ္ပဏီ၏သီးခြားကဏ္ sector နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးတွင်အကျုံး ၀ င်သောယေဘုယျပြissuesနာများနှင့်၎င်းတို့အဖွဲ့များနှင့်အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေသည်။
The Charlotte စီးပွားရေးဂျာနယ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည့် CEO Awards ပရိုဂရမ်သည်ယခုတတိယနှစ်တွင်ထိုဒေသခေါင်းဆောင်များအားမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
Charlotte စီးပွားရေးဂျာနယ် ၂၀၀၀ အထင်ရှားဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဆု
ဤလက်မှတ်လက်မှတ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးဒါရိုက်တာကဲ့သို့သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းများကိုပြသသော Charlotte-area အကြီးအကဲများသို့မဟုတ်အလားတူခေါင်းစဉ်ရှိသူများကိုဂုဏ်ပြုသည်။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းသည်အများပြည်သူအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပြီးစီးပွားရေးအသိုက်အ ၀ န်းမှအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဂုဏ်ပြုသူများ၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပြင်မှလာသည်။
The CBJ အယ်ဒီတာအဖွဲ့သည်အမျိုးအစား ၁၈ ခုမှဂုဏ်ထူးဆောင် ၃၅ ဦး ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏နယ်ပယ်တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ခိုင်မာသောမှတ်တမ်း၊ ထူးခြားသောဘဏ္performanceာရေးစွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေးကိုကတိကဝတ်ပြုခြင်း၊ ခိုင်မာသောအမြင်၊ လာမည့်အထူးအစီရင်ခံစာတွင်, CBJ အဆိုပါ honorees အပေါငျးတို့သပရိုဖိုင်းကိုတော်မူမည် လွန်ခဲ့သောနှစ်များကအစီအစဉ်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ.
ထို့အပြင် Lifetime Achievement ဆုရရှိသူအားလာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းအမည်ပေးလိမ့်မည်။
မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် Westin Charlotte ၌ကျင်းပမည့်ပွဲတစ်ခုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပြီးဤနေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ.
စတိဗ် Fisher သည် F&M ဘဏ်
Lee Fite, ပဉ္စမတတိယဘဏ်
Brett Grey က, Cushman & Wakefield
ဂျော်နီ Harris က, လင်ကွန်း Harris က
ဘရိုင်ယန် McManus, Hoopaugh အဆင့် Co. ,
Marcus Rabun, Myers & Chapman
Jayson Waller၊ PowerHome နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး
Liz Etheredge, Mecklenburg သုတ်ဆေးကုမ္ပဏီ
Marcus Smith က Speedway Motorsports
Ed Weisiger ဂျူနီယာ CTE (ယခင်ကာရိုလိုင်းနား Tractor & Equipment Co. )
တွမ် Finke, Barings
Matt Potere, Sunlight ဘဏ္Financialာရေး
Hissho Sushi CEO, Dan Beem
Dan Beem, Hissho ဆူရှီ
Landon Eckles၊ သန့်ရှင်းသောဖျော်ရည်
Conrad Hunter, Foxcroft ဝိုင်ကုမ္ပဏီ
Dena Diorio, Mecklenburg ကောင်တီ
Lindsay Muns, Charlotte Radiology
စတူးဝပ်ရော့စ်, ACO Med ထောက်ပံ့ရေး
Janeen Hogue, Miller-Hogue ဥပဒေကုမ္ပဏီ
ခရစ်စတိုဖာ Lam, Bradley Arant Boult Cummings
ယောဟနျသ Marrino, The Old Mecklenburg ဘီယာ
ကရင် Calder, စာသင်ခန်းဗဟို
ဝီလျံဂျုံးစ်, Thompson ကကလေး & မိသားစုအာရုံ
Tana ဂရင်း၊ MyWorkChoice (ဂရင်းကုမ္ပဏီအုပ်စု)
Amy Noland Pack, AccruePartners
Darius Adamczyk, Honeywell International Inc.
Charles Harrington, Parsons ကော်ပိုရေးရှင်း
Pat Riley, Allen Tate Cos ။
မာစီဝီလျံ၊ RKW လူနေအိမ်
Tom Coker, Reid's Fine Foods
ချာလီ Malouf, Broad မြစ်လက်လီ
ဒန် Rajkowski, Charlotte Knights
Fred သည် Whitfield, Hornets အားကစား & ဖျော်ဖြေရေး
Mark Mahoney, Jackrabbit Technologies
Bob Youakim, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ဖေ ‌ ဖော်တလ 11, 2020 ဘလော့ဂ်တည်နေရာများသတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
မီချီဂန်၌ပထမဆုံး Hissho Sushi & Craft Beer Bar ဖွင့်သည်
FSRMagazine.com တွင်မူလထုတ်ဝေထားသည့်ဆောင်းပါး၊ မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်သောကြာနေ့တွင်နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးဆူရှီကုမ္ပဏီဖြစ်သောမြောက်ကာရိုလိုင်းနားအခြေစိုက် Hissho Sushi Charlotte သည်မီချီဂန်၊ ဘရတ်တန်ရှိဆူရှီနှင့်ဘီယာဘားဆိုင်ရှိ Meijer စျေးဝယ်သူများအားအသစ်သောအယူအဆကိုပြသခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များအားထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများကိုပြသရန်ထိုအယူအဆကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အနောက်အနောက်တောင်ပိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်မီချီဂန်အခြေစိုက်ဘဲလ်ဘီယာကုမ္ပဏီတို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Hissho Sushi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dan Beem သည် Sushi & Craft Beer Bar ဖွင့်ပွဲတွင်ဖဲကြိုးကိုဖြတ်တောက်သည်။
Hissho ဆူရှီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dan Beem က“ ဒီအယူအဆသစ်နဲ့ Hissho Sushi ဟာဖောက်သည်တွေရဲ့ညနေခင်းကိုသူတို့ရဲ့ဒေသခံကုန်စုံဆိုင်မှာပြန်လည်စဉ်းစားနေသည်။ “ ဒေသခံစားဖိုမှူးများကနေ့စဉ် Meijer စျေးဝယ်သူများထံလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပရီမီယံဆူရှီများကိုပို့ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ဖြစ်သည်။ Hissho Sushi & Craft Beer Bar သည်စျေး ၀ ယ်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ဒေသတွင်းဘီယာသောက်သုံးမှုနှင့်အပတ်စဉ်ကုန်စုံပြေးလမ်းကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာခံစားနိုင်မည့်တစ် ဦး တည်းသောအတွေ့အကြုံများကို ထပ်မံ၍ သွားခွင့်ပြုသည်။ ”
Meijer အတွက် Merchandising ၏ဒါရိုက်တာ Becky Bronkema က“ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်များကို ၀ ယ်ယူစဉ်တွင်စဉ်းစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအားဖောက်သည်များအားပေးအပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ငါတို့ဆိုင်တော်တော်များများတွင်ပီဇာ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဆူရှီများအပါအ ၀ င်လတ်ဆတ်သောရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းစားသောက်ဆိုင်များသည်ဒေသခံအိမ်နီးချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ စီးပွားရေးအမြန်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အမြန်ရေစာစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကုန်စုံစျေး ၀ ယ်ခြင်းကိုသူတို့စာရင်းမှပယ်ဖျက်သည်။ ”
စူပါမားကတ်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများသည်စားနပ်ရိက္ခာ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောကဏ္ are ဖြစ်ပြီးယခု ၁TP2T12.7 ဘီလီယံကျော်လွန်ကြောင်းစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှပြောကြားခဲ့သည် Hissho ၏သုတေသနပြုချက်အရယနေ့သုံးစွဲသူများသည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများထက်မကရှာဖွေနေသည် - သူတို့သည်အတွေ့အကြုံရရန်ရှာနေသည်။ ဤတိုးတက်မှုကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်နှင့်စားသုံးသူများ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုရရှိရန် Hissho ကဆူရှီနှင့်ဘီယာဘီယာများကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့မှုများကိုသရုပ်ဖော်သည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုတင်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
“ ဟစ်စ်ဟိုသည်အသစ်တီထွင်မှုတစ်ခု၏အထွon်အထိပ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက် ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ဆက်ပြီးပေါ်ထွက်လာတာနဲ့အမျှနေ့စဉ်တိုးတက်နေတဲ့တန်ဖိုးရှိအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်သောလက်လီရောင်းချသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။
Meijer ကုန်စုံဆိုင်အတွင်း၌ထိုင်။ ထိုင်နေသောဆူရှီစားသောက်ဆိုင်သစ်သည်လတ်ဆတ်သောလက်ဖြင့်လှိမ့်ထားသောဆူရှီလိပ်များ၊ ပူစာစားချင်စိတ်နှင့်အခြားအရာများသာမက၎င်းတို့ကိုပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းသစ်များသာမကဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုပါတိုးတက်စေသည်။ ၈၄၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသည့်နေရာတွင် ၁၅ ယောက်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်ဒေသခံဆူရှီစားဖိုမှူးများကနေ့စဉ်အရည်အသွေးမြင့်မား။ တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောရင်းမြစ်များဖြင့်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ထားသောသွေးဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်သောဆူရှီများအပေါ်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ဖောက်သည်များသည်ရိုးရာအနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာများကိုကယ်လီဖိုးနီးယားလိပ်များနှင့် Krispy Krab တို့နှင့်အတူပိုငန်သောအာဟာရများအတွက် Spicy Red Pepper နှင့် Crunchy Shrimp လိပ်များနှင့်အတူတွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်များကဆုပ်ကိုင်။ သွားရန်ရွေးစရာကိုရှာနေပါကအသစ်သောလိပ်များကိုအသင့်စားဆိုင်၌နေ့တိုင်းထုပ်ပိုးပြီးလုပ်သည်။
Hissho ၏ဆန်းသစ်သောဆူရှီလိပ်များနှင့်အတူဖောက်သည်များသည်အာရှကြက်သားအတောင်ပံများ၊ Boom Boom Shrimp၊ Dim Sum နှင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောဘီယာစာရင်းများအပါအ ၀ င်ပူပြင်းသည့်အက်စစ်များပါသောမီနူးအပြည့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထိုအယူအဆတွင် Healthy Morning Collection ပါဝင်သောနံနက်ခင်းအကြိုက်များ၊ avocado toast, acai ဖလားများနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များပါ ၀ င်သည်။
"Hissho ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အယူအဆတွေကိုပေးချင်တယ်။ ဒါမှငါတို့ဆက်ဆံရေးနဲ့ရောင်းအားကဆက်ပြီးကြီးထွားနိုင်တယ်" ဟု Beem ကဆိုသည်။ ပရိသတ်များနှင့်မိတ်ဖက်အသစ်များအားဤအယူအဆဖြင့်ရောက်ရှိရန်နှင့်ဆူရှီအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဆက်လက်မျှဝေရန်အတွက်၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊
ဖေ ‌ စက်တင်ဘာ 10, 2020 ဘလော့ဂ်တည်နေရာများသတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
မူလက ClickOnDetroit.com တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောစာမူ၊ ဖတ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ မူရင်း
Brighton ရှိ Meijer အတွင်းရှိ Hissho Sushi တွင်ထိုင်ပါ
Metro Detroit တွင်ပျော်ရွှင်သောနာရီအသစ်တစ်ခုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိဆူရှီနှင့်ဘီယာကောမည်သို့နည်း။
အိမ်ရှင် Tati Amare သည် Metro Detroit ရှိကုန်စုံစျေးဝယ်ခြင်းဂိမ်းကိုပြောင်းလဲစေသောပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်အသစ်အကြောင်း Chef Derek Layson နှင့် John Golaszewski နှင့် Hissho Sushi တို့နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Hissho ဆူရှီသည် Meijer တစ်ခုစီတွင်စားဖိုမှူးများထည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များအားလတ်ဆတ်သောဆူရှီများပြုလုပ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဤစားသောက်ဆိုင်သည်သင်နှစ်သက်သောဆူရှီလိပ်နှင့်အတူဘီယာနှင့်တွဲစပ်နေလိမ့်မည်။
Hissho Sushi သည်သင်ရွေးချယ်သောဆူရှီနှင့်မီချီဂန်လုပ်ဘီယာအကောင်းဆုံးတွဲဖက်မှုကိုဖန်တီးရန် Kalamazoo ရှိ Bell's Brewery နှင့်လည်းပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Grand မြစ်ပေါ်ရှိ Brighton ရှိ Hissho Sushi စားသောက်ဆိုင်ကို Meijer ၏အတွင်းပိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2020 ဘလော့ဂ်တည်နေရာများသတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား - Hissho ဆူရှီနှင့်လက်မှုပညာဘီယာဘား - Brighton Meijer
BetterOnDraft.com တွင်မူလထုတ်ဝေထားသောဆောင်းပါး၊ မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Ed ကက Norton သည်
အတွက်စျေးဝယ်အများစုသည် Brighton's Meijerဒါဟာပုံမှန်မွန်းတည့်စျေးဝယ်ခရီးပဲ။
Meijer မှအမှုဆောင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများလူနည်းစုအတွက် Hissho ဆူရှီမီဒီယာနှင့်ရပ်ရွာလူထုကယခင်အိမ်တွင်း Starbucks တည်နေရာရှေ့တွင်စုရုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Meijer တည်နေရာ၏ပထမ ဦး ဆုံး Hissho ဆူရှီနှင့် Craft ဘီယာဘားသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
Brighton ကိုရွေးချယ်သူများကလူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှုအရရှာဖွေနေသည့်အရာအားလုံးကြောင့်ဖြစ်သည်။ Hissho ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌ Brian Kiel နှင့်စီအီးအို Dan Beem တို့ကဆူရှီနှင့်ဘီယာဘီဘားတို့သည်ရပ်ရွာလူထုကိုအိမ်တစ်အိမ်အောက်ရှိစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်အတွေ့အကြုံများကိုပေးမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိအာရုံစူးစိုက်မှုသည်မက်ထရိုဒက်ထရွိုက်၊ မီချီဂန်သို့မဟုတ် Meijer စတိုးဆိုင်များရှိအခြားပြည်နယ်များဖြစ်ဖြစ်အခြားစျေးကွက်သို့မ ၀ င်မီအယူအဆနှင့်အတွေ့အကြုံကိုပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်သည်။
Hissho ဆူရှီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dan Beem နှင့် Meijer's Buyer Merchandiser Deli / ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများ၊ Brad Miller ကရပ်ရွာလူထုကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးဖဲကြိုးဖြတ်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်သည်
Hissho Sushi သည် Meijer ကိုလွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သောဆူရှီဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်းစားသောက်ဆိုင်အတွက်မိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းသည်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေသည်။ စားသောက်ဆိုင်တွင်လူ ၂၅ ယောက်ထိုင်နိုင်ပြီး Meijer စတိုးဆိုင်များတွင် Hissho ၀ ယ်ယူနိုင်သောဆူရှီလိပ်ထက်ကျော်လွန်သော menu ကိုရရှိနိုင်သည်။
Hissho ဆူရှီကိုရောင်းသော Meijer နေရာများတွင် Deli အပိုင်း၏နောက်ကျောတွင်ဆူရှီအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးပြင်ဆင်မှုနှင့်လှည့်လည်ခွင့်ရထားသော franchisee တစ်ခုရှိသည်။ အခုတော့စျေးဝယ်သူမှော်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်!
Hissho ၏ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သူ Patric Knapp ကမီနူးများအားလုံးကို ၁၀ မိနစ်အောက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အစားအစာများကိုလူများအစာစားချင်သည်ဖြစ်စေယူလိုသည်ဖြစ်စေအမြန်ဆုံးနှင့်တိကျစွာစုဆောင်းရန်အာရုံစိုက်မည်။ အဲဒီမှာအဖွင့်ပွဲမှာစားဖို့ဟင်းပွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ငါအရာအားလုံးကိုအရသာဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသင်တို့အားငါပြောနိုင်ပါတယ်။
ယာဉ်ဘီယာဘားများအတွက်ယာဉ်ဘီယာမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ် ဘဲလ်ရဲ့ဘီယာ။ ဒေလီနှင့်အသင့်စားအစားအစာများအတွက် Meijer's Buyer Merchandiser ဖြစ်သည့် Brad Miller က Meijer သည် Bell ၏လက်တွဲမှုအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဘဲလ်၏အောင်မြင်မှုကိုမီချီဂန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်လွတ်လပ်သောယာဉ်ဘီယာများအဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သည်ကို Miller ကအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူက Hissho Sushi အယူအဆအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဆူရှီနှင့်ဘီယာဘားများပိုမိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်လျှင် Meijer သည် Meijer နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မည့်ပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောဘီယာချက်စက်ရုံများကိုကြည့်ရှုမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ် ဦး နှလုံး Ale
ဘဲလ်ရဲ့ဘီယာအပြင်, အဲဒီမှာဖြစ်လိမ့်မည် Hitachino အသိုက် Lager ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Kiuchi Brewery မှလည်းကောင်း၊ ဒေသတွင်းရှိဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးမှအနီနှင့်အဖြူရောင်ဝိုင်များနှင့်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လည်းကောင်းအတူတူဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်သူများသည်စားသောက်ဆိုင်ထက် ကျော်လွန်၍ သောက်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း Hissho နှင့် Meijer တို့သည် Grand Rapids Meijer စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည့်ကြီးထွားလာသည့်အသားတင်စက်ရုံရှိရန်လိုင်စင်ချထားပေးလိမ့်မည်။
8650 Grand River Avenue တွင်တည်ရှိသော Brighton's Meijer စတိုးဆိုင်တွင်ဤတစ်မျိုးတည်းဆူရှီနှင့်ယာဉ်ဘီယာဘားကိုစစ်ဆေးပါ။
ဖေ ‌ ဖော်ောလလ 6, 2020 ဘလော့ဂ်တည်နေရာများသတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
CorpMagazine.com တွင်မူလထုတ်ဝေသောဆောင်းပါး၊ ဖတ်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ မူရင်း
အချို့သောအစားအစာနှင့်သောက်သုံးသောပေါင်းစပ်မှုများသည်အတူတကွပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီးမီချီဂန်ဒေသခံများအတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ပိုကောင်း Made နှင့် Faygo ။ Sanders နှင့် Germack ကော်ဖီ။ နှင့်အညီ, ယခု, ကြီးထွားလာစာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းရန်အသစ်တခုရှိသေး၏။
Hissho ဆူရှီနှင့်ဘီယာဘီဘား Menu
ယခုလတွင်မီချီဂန်သည်ဆူရှီနှင့်အခြားရိုးရာဟင်းလျာများတွင်တီထွင်သူအဖြစ်လူသိများသောပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သော Hissho Sushi, NC Charlotte ကိုရရှိလိမ့်မည်။ Brighton တွင်ဆိုင်ဖွင့်ရန် Grand Rapids အခြေစိုက် Meijer နှင့် Kalamazoo အခြေစိုက် Bell's Brewery နှင့်ပူးပေါင်းနေသည်။
Hissho ဆူရှီနှင့်ဘီယာဘီဘား - Avocado Toast
ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်စတိုးဆိုင်သည်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကြီးအတွင်း၌စတုရန်း ၈၄၀ ရှိသည့်နေရာအကျယ်အ ၀ န်းကိုမီးမောင်းထိုးပြမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အစားအစာနှင့်ဘီယာစာရင်းကြီးကိုထိပုတ်ပါ။
Hissho Sushi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Danny Beem က“ ဒီသဘောတရားအသစ်ကြောင့် Hissho Sushi ဟာဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ဒေသခံကုန်စုံဆိုင်သို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်ရှင်းပြသည်။ ဒေသခံစားဖိုမှူးများကပြင်ဆင်ပေးသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပရီမီယံဆူရှီများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်လီမိတ်ဖက်များနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။ Hissho Sushi & Craft Beer Bar သည်စျေး ၀ ယ်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ဒေသတွင်းဘီယာသောက်သုံးမှုနှင့်သူတို့၏အပတ်စဉ်ကုန်စုံဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သောအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။
အထူးလေ့ကျင့်ပေးထားသောဆူရှီစားဖိုမှူးများအပါအ ၀ င်စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်ပါ ၀ င်သည့်စားသောက်ဆိုင်တွင်စားသောက်ဆိုင်၌စားသောက်ရမည်။ Hissho ၏ဆန်းသစ်သောဆူရှီလိပ်များနှင့်အတူဖောက်သည်များသည်အာရှကြက်သားအတောင်ပံများ၊ Boom Boom Shrimp၊ Dim Sum နှင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောဘီယာစာရင်းများအပါအ ၀ င်ပူပြင်းသည့်အက်စစ်များပါသောမီနူးအပြည့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နံနက်ခင်းအကြိုက်ဆုံးနံနက်ခင်းစားစရာများ၊ acai ဖလားများနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များသယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
Hissho Sushi သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပြည်နယ် ၄၂ ခုတွင်နေရာ ၂၀၀၀ နီးပါးသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ Hissho ဆူရှီသည်ကုန်စုံ၊ တက္ကသိုလ်၊ ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာလက်လီရောင်းချသူများနှင့်လက်တွဲသည်။
National Sushi Vendor သည် Brighton Meijer ကိုပထမဆုံးဆူရှီ၊ Craft Beer Bar အတွက်ရွေးချယ်သည်
LivingstonDaily.com တွင်မူလထုတ်ဝေသောဆောင်းပါး၊ မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ဂျနီဖာ Timar အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Brighton Meijer စတိုးအတွင်းရှိ Hissho Sushi & Craft Beer Bar ၏ franchisee ဖြစ်သော Gan Hpung က ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး Hissho Sushi & Craft Beer Bar ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်ဖောက်သည်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ - Gillis Benedict / Livingston Daily)
အမျိုးသားဆူရှီရောင်းချသူတစ် ဦး က Brighton's Meijer ကို၎င်း၏ပထမဆုံး s ည့်ခန်းဆူရှီနှင့်ဘီယာစားသောက်ဆိုင်များနေရာအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ NC အခြေစိုက် Hissho Sushi သည် Charlotte က၎င်း၏ပထမဆုံး Hissho Sushi & Craft Beer Bar ကို Meijer စတိုးသို့ ၈၆၅၀ Grand River Ave တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Hissho Sushi သည်ကြိုးစားနေသည့်အယူအဆသစ်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များသည် Brisson Meijer အတွင်းရှိ Hissho ဆူရှီနှင့်လက်မှုဘီယာဘားရှေ့မျက်နှာစာရှိဆူရှီထုတ်ကုန်များသေတ္တာများမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်၊ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်၊ (ဓာတ်ပုံ - Gillis Benedict / Livingston Daily)
“ ဖောက်သည်တွေကဆူရှီဝယ်တာ၊ ထွက်တာထက်ပိုလိုချင်ကြတယ်။ သူတို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုလိုချင်တယ်” ဟု Hissho Sushi ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Brian Kiel
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Brighton စားသောက်ဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆူရှီ၊ အခြားအစားအစာများ၊ နံနက်စာစားစရာများနှင့်အချိုပွဲများကျွေးသည်။ သောကြာနေ့မွန်းတည့်မှ 1 နာရီအထိဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်းသည်အနီရောင်ကော်ဇောပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ လက်ဆောင်များကိုပထမဆုံး ၀ ယ်ယူသူ (၂၅) ဦး အားပေးမည်ဖြစ်ပြီးစျေး ၀ ယ်သူသည် Hissho Sushi ကိုတစ်နှစ်ရရှိရန် ၀ င်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပိတ်ခဲ့သော Starbucks ရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ကုန်စုံဝင်ပေါက်အတွင်း၌တည်ရှိသည်။
မီချီဂန်ဘီယာ + မီနူးအသစ်
သောကြာနေ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ဘီယာနှင့်ဝိုင်များကိုဘီယာနှင့်ဝိုင်များကိုစတင်ရောင်းချမည်။ Kalamazoo အခြေစိုက် Bell's Brewery မှယာဉ်ဘီယာများကို ၀ ယ်ယူမည်။
"Meijer ကို ၀ ယ်သူတွေ ၀ င်လာတာကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ သူတို့ကဒေသခံတွေပဲ" ဟု Kiel ကပြောသည်။ “ ဒီအယူအဆသစ်နဲ့ငါတို့ဒေသတွင်းဘီယာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ ”
Hissho Sushi & Craft Beer Bar franchisee Gan Hpung သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ Brighton Meijer အတွင်းရှိစတိုးဆိုင်သစ်တွင်အရသာကောင်းလှသည့် Sashimi များကိုပြင်ဆင်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - Gillis Benedict / Livingston Daily)
ဆူရှီနှင့်ဘီယာဘားတို့သည်လူကြိုက်များသောဝိုင်များကိုလည်းရောင်းချပေးလိမ့်မည်ဟုသူကပြောသည်။ စားသောက်ခန်းမတွင်နေ့စဉ်ပြင်ဆင်ထားသောဆူရှီလိပ်များပါ ၀ င်သည်။ အာရှကြက်သားအတောင်ပံများ၊ စန်းပွင့်ပုဇွန်နှင့် Dim sum စသည့်ပူပြင်းစွာရရှိနိုင်သည့်အစားအစာများကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်သည်။ နံနက်စာမီနူးအပြည့်တွင်ထောပတ်သီးကင်၊ acai ဖလားနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များပါဝင်သည်။
Kiel ကကုမ္ပဏီသည် Brighton တည်နေရာတွင်ဆူရှီမဟုတ်သောဟင်းလျာများကိုထည့်ရန်၎င်း၏ menu ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Brighton တည်နေရာရှိဆူရှီစားဖိုမှူးနှင့်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် Gan Hpung သည်မီရှီဂန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအနီးရှိကော်ဖီဆိုင်များနှင့်အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များအပါအ ၀ င်အမ်းအာဘရာရှိနေရာ ၁၆ နေရာသို့ဆူရှီများကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Hpung ကသူသည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး Hissho Sushi & Craft Beer Bar ကိုဖွင့်ပြီးဖောက်သည်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
“ အခုဆိုရင်ငါဖောက်သည်တွေကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်နည်းနည်းပိုရှိလာပြီ။
သူကကဏန်း crispy ပုစွန်ခြောက်ပုဇွန်ဆူလိပ်တွေဟာသူရောင်းတဲ့လူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းတွေလို့ပြောပါတယ်။
"ငါကလူတွေအတွက်Pokéဖလားတွေလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ " ပိုကီသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသားဓာတ်ငါး၊ ဆန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
Brighton အတွက်တစ် ဦး က 'ပစ် pad'; လာမယ့်တော်ဝင် Oak
Kiel က Brighton တည်နေရာနှင့် Royal Oak ရှိ Meijer စတိုးဆိုင်အတွက်သူတို့စီစဉ်ထားသည့်ဒုတိယနေရာသည်ကုမ္ပဏီ၏သဘောသဘာဝကိုစမ်းသပ်ရန်“ စတင်သည့်နေရာ” ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Royal Oak တည်နေရာကိုယခုနှစ်အတွင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။
“ ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မယ်။ Meijer ကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတိုးချဲ့လိမ့်မယ်။ “ အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်က Meijer စတိုးဆိုင်များတွင်ဤနေရာများကိုကြီးထွားရန်ဖြစ်သည်။ အားလုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လက်ဖြင့်ရွေးထားသောနေရာများဖြစ်သည်။
Hissho ဆူရှီသည် Meijer အတွက်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ စတိုးဆိုင်သည်ဆူရှီများကိုသေးငယ်သော display case တစ်ခုမှရောင်းချခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို Meijer စတိုးဆိုင် ၁၀၀ ခန့်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့တွင် Brighton's ကဲ့သို့စားသောက်ဆိုင်နေရာမရှိချေ။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စတိုးဆိုင်များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများတွင်ဆူရှီများကိုရောင်းချသည်။ ဆူရှီကို franchisees များကရောင်းချပြီးတစ်ခါတစ်ရံ site ပေါ်တွင်ရောင်းချသည်။ အခြားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည်ဆူရှီများကိုစတိုးဆိုင်များနှင့်အဆောက်အ ဦး များသို့ပို့ပေးသည်။
"ဒါကအခွင့်အလမ်းပိုများတယ်" ဟု Kiel ပြောခဲ့သည်။
Hissho Sushi ကိုပြည်နယ် ၄၂ ခုမှာရှိတဲ့နေရာ ၁,၇၅၀ လောက်မှာရောင်းတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။
Hissho Sushi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Danny Beem မှ Hissho Sushi သည်သူတို့၏ကုန်စုံဆိုင်သို့ဖောက်သည်တစ် ဦး လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံကိုဤအယူအဆသစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရှင်းပြနေသည်။ ဒေသခံစားဖိုမှူးများကပြင်ဆင်ပေးသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပရီမီယံဆူရှီများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်လီမိတ်ဖက်များနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။ Hissho Sushi & Craft Beer Bar သည်စျေး ၀ ယ်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ဒေသတွင်းဘီယာသောက်သုံးမှုနှင့်သူတို့၏အပတ်စဉ်ကုန်စုံဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သောအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။
ဇန်နဝါရီ 15, 2020 ဘလော့ဂ်သတင်းTips and Advice က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ
Have you ever wanted to try sushi, but you can’t stand to think about eating raw fish? Today on QC@3, Chef Dan Yang from Hissho ဆူရှီ showed us how sushi can be vegetarian. He even taught Cheryl how to createaroll of sushi!
ဇန်နဝါရီ 1, 2020 ဘလော့ဂ်သတင်း က Hissho သတင်း0မှတ်ချက်များ